I-Diameter emikhulu yenziwe nge-Alumina Ceramic Cylinder China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-metallized ceramics > I-Metallized Tube ye-Ceramic > I-Diameter emikhulu yenziwe nge-Alumina Ceramic Cylinder
Ngokukhethwa kwethu kwezindlela zokufaka imali, okuqukethe ukushicilelwa kwesikrini, ukunyatheliswa kwedijithali, ukugqoka ukushayela, sinikeza izinsimbi ezihlukahlukene ze-ceramic insulators enejometri ehlukene yendawo. Lezi zeramic zensimbi zisiza i-ceramic ngensimbi, i-ceramic ku-ceramic ukuze kufinyeleleke ngokujoyina ngebhande. Zonke izitsha ze-ceramics zensimbi esinikeza zona zinikeza amandla okugqama okuvelele nokuqina komoya.
Singakwazi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ezikhethekile ukuze sinikeze izinhlobo ezahlukene zokubethelwa kwe-metal, I-plating ejwayelekile efakwe ngezansi:
1. I- ceramic ejulile + ye-Molybdenum / iManganese (Mo / Mn) yensimbi ye-metallization 2. I- ceramic ephezulu + ye-tungsten (W) yensimbi 3. I- raam eqoshiwe ye-ceramic + ye-Silver (Ag)
4. I- crayamic eqoshiwe + Mo / Mn metallization + Nickle (Ni) 5. I- ceramic ephezulu + W wensimbi yensimbi yegolide (Au)
Siyakwazi ukufeza izinga elilodwa lokucacisa ebangeni ngokugaya okuhle, ukuchithwa kwe-CNC, izinqubo zokusika. Ukubekezelelana okungcono kunazo zonke kungaba +/- 0.001 ngokulinganisa konke. Futhi ukwelapha okugcoba ngaphakathi kwendawo yangaphakathi, noma yangaphandle kungenziwa ngokwethu.